छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस्
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीछोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस्
August 28, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 227957
सबै महिलाहरुलाई आफ्नो क’पाल लामो र सुन्दर बनाउन मन पर्छ । तर चाहेर पनि बनाउन सकीरहे’का हुँदैनो । हा’मीले आफ्नो शरीरमा जुन चिज प्रयोग गर्छौ उस’को प्रभाव हाम्रो कपालमा पनि पर्नसक्छ । कपाल राम्रो गराउनु भन्दा पनि पहिला झर्न रोक्नु पर्छ ।
कपालको हेरविचार’कपाल धुने तरीका परिर्वत’न गर्नेः हप्ता’मा तीन पटक भन्दा धेरै धुनु हुँदैन । कपाल चिसो वा सहन सक्ने पानीले धुनु पर्छ ।
कपाल बिस्तारै सुकाउनेः कपाल’लाई टावेल’ले झटकेर सुकाउनु हुँदैन । कपाल भोएर टावेलले विस्तारै थप’थपाएर सुकाउने र हावामा आफै सुक्न दिने ।
कपालमा कडा केमि’कल्सको प्रयोग नगर्नेः केही कर्म’शियल स्याम्पुमा सल्फेट पाइने हुनाले कपालबाट प्राकृ’तिक आयल निकाली दिन्छ यसबाट कपाललाई हानी गर्छ । कपाललाई बलियो ब’नाउन राम्रो स्याम्पुको प्रयोग मात्र गर्ने ।
सबै प्राकृतिक हेयरस्टाइ’लिंग प्रविधि र उत्पादन’हरुको प्रयोग गर्नेः
दुई हप्ता’मा एक पटक कपालमा हेयर मास्क लगाउनेः यसले कपालबाट नमी निक्लिए पछि हुने हानी’लाई कम गर्छ । यसको प्रयोग’बाट कपाल नरम, मुलायम र स्वस्थ अनुभव हुन्छ ।
बाहीरी प्रदुषणबाट जोगाउनेः लामो स’मय घाम वा उच्च वायु प्रदुषण हुने स्थानमा जानु पहिले नै क’पाल छोप्नुपर्छ ।- हेल्थ टिप्स
विनोद चौधरीलाई कोरोना पुष्टि, सम्पर्कमा रहे’कालाई सचेत रहन गरे आग्रह
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव
August 30, 2020 admin समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली 242050
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विरुद्ध लड्न मा’नव जीवनमा निद्राको ठूलो भूमिका रहने जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे’ले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक स्ट्या’टस लेख्दै उनले कोरोना संक्रमण लगायतका विभिन्न रोग’हरूसँग लड्नका लागि
August 22, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 14272
August 2, 2020 Administer बिज्ञान प्रबिधि, स्वास्थ्य /जिबनशैली 13750